Kubadaha biraha, ahama Ball Ball, UFO Ball - Sunrise
Changzhou Sunrise Steel Ball Co., Ltd. waa soo saare kubbado bir ah oo leh qalab tijaabo oo qalabaysan iyo xoog farsamo oo xoog leh. Iyada oo leh noocyo kala duwan, tayo wanaagsan, qiimo macquul ah iyo naqshado casri ah, alaabooyinkeenna waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa beersareyaasha iyo warshadaha kale. Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loo aqoonsan yahay oo ay ku kalsoon yihiin dadka isticmaala waxayna la kulmi karaan si joogto ah isbeddelada baahiyaha dhaqaale iyo bulsho. Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ee ka kala socda qeybaha kala duwan ee bulshada si ay noola soo xiriiraan xiriir ganacsi mustaqbalka iyo guul wadaaga!
Shirkadda kubbadda biraha qorraxdu ka soo baxdo waxaa la aasaasay 1992.
Meelaha arjiga: 304 ahama ...
Meelaha arjiga: 316 ahama ...
Meelaha arjiga: 440C ahama ...
Meelaha arjiga: 420 ahama ...
DAAWO DHAMMAAN SOO SAARKA
Soosaaray tikniyoolajiyad daweynta kuleylka oo isku dhaf ah, laga bilaabo sawirka siligga, biraha qabow, kubbadda siman, daaweynta kuleylka, xoqidda, xoqida, nadiifinta, nadiifinta kormeerka, baakadaha, habka wax soo saarka hal-joojinta, iyo habab taxane ah oo ka imanaya wax soo saarka semi-dhammeeyey iibinta kubbada.
Marka loo eego heerka 'ISO17025', walxo kiimiko kala duwan, aalado farsamo, iyo unugyo gudaha ah ayaa la baari karaa lana tijaabin karaa.
Dhammaan 4 khadadka wax soo saarka kubbadda birta ah waxaa gacanta ku haya kombuyuutar. Sababta oo ah hoos u dhaca faragelinta gacanta iyo wareejinta geedi socodka, tayada badeecadeenu waxay leedahay xasilooni sare xitaa inta udhaxeysa dufcado kala duwan. Adeegsiga alaabtayada ayaa sifiican u dabooli kara baahiyahaaga Sheegasho.
Goobta arjiga: 1010/1015 kaarboon st ...
Kubbadda naxaasku waxay inta badan isticmaashaa naxaas H62, taas oo ...
3mm Kubadda Maxaas, Ball Ss304, Kubad Naxaas adag, Kubad Naxaas adag, Kubbad naxaas ah, 3mm Kubadda Maarta ah,